Beerta iyo DIY
Waxaan jecel nahay Beerta iyo sida waxqabad kasta, DIY ayaa joogta. Iyadoo DIY beerta dhexdeeda waxaan tixraaceynaa tilmaamaha iyo casharrada u samee qalab iyo walxaha beerteenna.
Waxa aan dooneyno ayaa ah marka aad fikrad ka haysato beertaada, laga bilaabo waraabinta otomaatiga ah ilaa dhismaha weelka ubaxa, aqalka dhirta lagu koriyo ama aalad lagu abuuro abuurka, ha eegin meesha aad ka iibsan karto laakiin halkan fiiri oo ka fikir sideed u qaban kartaa naftaada.
Waxaan isticmaalayaa a busta kululaynta si ay u soo baxaan iniinaha. Waa buste koronto (kuleyl ah) oo kor u qaadaysa heerkulka carrada qiyaastii 10ºC waxayna dedejineysaa dhalashada abuurka iyo xididka gooynta. Runtii natiijooyin fiican ayaan ku helay abuurkii Basbaaska Habañero. Iyaga oo ka dhigaya inay ku soobaxaan 8 maalmood gudahood
Waxaa jira noocyo kala duwan, marka lagu daro cabirka ay ku kala duwan yihiin awoodda. Waxaa jira kuwa 17,5W oo badanaa kor u qaada heerkulka deegaanka 10% iyo kuwa 40,5W oo udhaxeeya 10 ilaa 20 darajo. Markaad hawlgaliso waa inaad sugto illaa 20 daqiiqo illaa ay ka kululaanayso heerkulka ugu dambeeya. Waxay si aad ah ugu shaqeeyaan damacyada ama inay horumariyaan geedo. Sannadkan sidii had iyo jeerba waan la daahi jiray waxyaabo beero, laakiin haye. Waxaan horey u haystay bustaha sanadka soo socda. Waan haystaa iibsaday tan.
Xitaa haddii aad rabto inaad wax walba si qumman u maamusho waxaad a heerkulbeeg sidan ah, ama samee mid ku saleysan Arduino iyo Relay (waa mashruuc aan sugayo).
Sida loo sameeyo makhaayad laga sameeyo bocorka
Tan iyo xagaagii hore mid baan qalajiyaa bocor (gourd dipper) la mid ah bocorka xajka, laakiin qaabkan aadka u dheereeya.
Waqtigana waa la gaadhay in wax lala qabto ;-)
Maaddaama aan kaydiyay 1 keliya waxaan rabaa inaan u isticmaalo sidii mid uun kantiin biyo lagu qaado. Dhismihiisu waa mid aad u fudud. Kaliya waa inaan faaruqino oo aan xoqno.
Waraabka qulqulaya qoraxda - Kondenskompressor
Raadinta macluumaad ku saabsan waraabinta guryaha otomaatiga ah xagaaga Waxaan la kulmay yaabkan.
Haa; Marka sidaan loo arko, maahan wax layaableh farsamada, waa run, kaliya waa dhalooyin caag ah laakiin aaladda oo dhan fudeydkeeda ayaa noo oggolaan doonta waraab otomatik ah iyo keyd biyo badan.
Waa wax ku saabsan Kondeskompressor, :) nidaam waraabinta faleebada qoraxda ah. Nidaamku wuxuu ku saleysan yahay uumiga iyo uumiga biyaha si toos ah loogu siiyo geedka huurka uu u baahan yahay.
Paletocactus - Sida loo sameeyo geedka kaykus ee santuuqa
Dhowr maalmood ka hor waxaan aragnay sida loo sameeyo beer toosan oo leh sariirtaada.
Maanta waxaan keenaynaa wax ka beddelid aad u la mid ah, laakiin taasi waxay ka kooban tahay adeegsiga xargaha santuuqyo si loo beero. Ku habboon in la dhigo kakactus iyo succulent ama hilib kuwaas oo si fiican u adkeysta dhul qalalan.
Sida loo sameeyo beer toosan oo leh sariirtaada
Miyaad leedahay balakoon oo ma waxaad jeceshahay dhir iyo beero? Waa hagaag fiiri sida sariirta u rogo beer toosan oo toosan.
Ma ahan Jardiinooyinka sudhan ee Baabuloon, laakiin waxaad ku bilaabaneysaa heer sare ;-)
Waan hubaa inaad ka heshay, eeje. Marka halkan ayaan tagnaa.
Sida toosh looga sameeyo dhalada khamriga
Tani waa mid ka mid ah casharradan aan ku helay anigoo ka boodaya hal bog oo mid kale u rogaya.
Fikradda waa dib u isticmaal dhalooyinka si aad uga dhigto laambado. Ku habboon inaad iyaga ku haysatid beertaada xagaaga.
Kuwani waa qalabka aan u baahan doono. Dhamaan way cadahay, laga yaabee inay fiicantahay in la cadeeyo ...
2. waa Teflon, nooca loo isticmaalo tuubbooyinka.
5. iyo 6. Isku xidhka iyo daboolka naxaasta
Sida loo sameeyo quudiyaha shimbiraha guriga lagu sameeyo
Guga waa halkaan iyo beeraha, beero ama geedo iyo magaalooyin waxaa ka buuxa shimbiro bilaabanaya xilliga taranka.
Haddii aad leedahay beer, ama meel uun ay shimbiraha ka yimaadaan, waxaan ka dhigi karnaa quudiyahan aadka u jaban ee leh taarikada Ikea.
Farqiga u dhexeeya quudiyahan iyo kuwa kale ee aan ku samayn karno qalab kale ayaa ah inay ka yara qurux badan tahay dhalooyinka caagga ah.
Qalabka aan u baahanahay waxaa lagu matalaa sawirka soo socda, waa kuwo aad u yar oo aad u jaban.